Vanhu vemazuva ano vanotarisira kudzokera kuhupenyu hwavo hwepakutanga kubva mukushushikana kwemazuva ese nekushushikana uye kuteedzera hupenyu hwechokwadi. Neye yakanakisa yekusona uye yakasununguka, yakapusa & yakasarudzika mutambo bhachi, tinogona kudzora nhanho kubva kuhupenyu hwedu hwekukurumidza uye husina mutsindo nekunyarara.
Iri bhachi remitambo rakakodzera mhando dzese dzehupenyu zviitiko, kungave kuri kumhanya, kukwira uye mimwe mitambo yekunze kana kudzidziswa kwemukati. Iine hunhu hwemitambo inoshanda, inogona kushandisika inoshandiswa mumitambo yakasiyana siyana uye inoshandura nyore nyore kubva kunhandare yemitambo kuenda kuzororo rezuva nezuva. Ichi chizere donje zvinhu zvinoshandisa jira repakati huremu neakasarudzika jira kuruka mukati mechisikirwo dhizaini jira pamusoro, ndokuzobatanidza rinoshanda jira, izvo zvinoita kuti mutambo bhachi kuti riwane yakanyanya kudziya kuchengetedza uye kuwedzeresa.
Yedu R & D timu inoshandisa iyo yakasungwa inoshanda jira kuti uwane inodziya, kuwedzera, kugadzikana & mafashoni mhedzisiro. Iine tambo yekukweva pane hood, rakasungwa pazasi uye cuff & yazvino fashoni isina mvura & kubaya zipi, dhizaini iyi ichave isina mvura uye inotonhora-chiratidzo. Iyo yazvino fashoni yezvipfeko zvigadzirwa ndeye geometric kubaya dhizaini, iyo isingogadzirise chete dhizaini dhizaini & kunakidza asi zvakare inogutsa vechidiki kutsvaga kwekusiyana-siyana uye kuzvimiririra, iri zvakare dudziro yakakwana yezvakajairika aesthetics.
Nekudaro kutsvaga kwevanhu mune zvipfeko kubhadhara zvakanyanya kutarisana nekuenderana kwemafashoni uye nekuita, senge raincoat reMusikana. Musiyano wezvinhu unoita kuti raincoat rive rakapfuma uye rine mavara, mutsauko wemavara haungosangana chete nezvinodiwa zvemwaka zvakasiyana, asi zvakare unoita kuti jasi remvura riine zvitaera zvakasiyana. Iyo fashoni, hunhu uye chigadzirwa chigadzirwa chisisina imwechete dhizaini zvinoenderana nesviro yemireniyoni vanhu 'sarudzo yekutevera yakasarudzika uye chaiyo kupfeka.
Jasi remusikana uyu rinotyora masitayera uye zvinhu zvechivanhu mvura inonaya, iyo isingangoshandiswa chete senzvimbo yekugara mukati memakore uye kuchinaya mazuva, asi zvakare inogona kushandiswa sejasi kupfeka zvakajairika, yakajeka ruvara collocation inounza kunzwa kwakasimba kune vanhu.
Muviri we raincoat unoshandisa machira ekumonera akaputirwa panzvimbo pemachira akajairwa ePVC, ayo ane kusimba kukuru uye anotendera vana kutambanudza miviri yavo mumaradhi makuru kuti vaburitse hunhu hwavo hwepanyama. Izvo zvinowedzera kuwedzera kunakidza kuisa akasiyana maumbirwo e sequins pane iyo yakajeka PVC machira ehodhi nehem uye kuita kuti vanhu vanoapfeka ivo vazove akakosha eruzhinji, zipi inogadzirwawo nePV zvinhu, zviri nani kuenderana ne machira.